Arahabaina fa nandresy ny fety | NewsMada
Arahabaina fa nandresy ny fety
Vita soa aman-tsara iny ny fetin’ny Paska, izay niainan’ny rehetra. Faly avokoa ny daholobe satria afaka nankalaza izany, tamin’ny fomba maro samihafa. Eny fa na nisy ihany aza ny indrokely sy ny voina isan-karazany, nifety avokoa ny mpianakavy.
Fandresen’ny Tompo ny fahafatesana ka nanavotana ny fahotan’izao tontolo izao ny Paska ho an’ny kristianina. Fihinanambe sy fisotroana kosa izany ho an’ny hafa. Na tsy kristianina na kristianina anefa, samy nifety avokoa. Azo lazaina fa nandresy ny fety. Tsy nisy toerana tsy nahitana fety sy olona nifety rehefa toerana malalaka eto amin’ny tanàna.
Samy nanana ny niainana izany ny tsirairay isan-tokantrano sy isam-batan’olona ary ny isam-pianakaviana. Tao ny nahavatra nandany vola, nanaovana fety aman-danonana satria indray mandeha mandalo amin’ny taona ny Paska.
“Mifety aloha fa rahampitso indray mitady ê”, hoy ny renim-pianakaviana iray, tao anatin’ny fankalazana ny Paska 2017 iny. Fanararaotana kosa hitadiavana vola, ho an’ny sasany. Manao izay mety mihitsy amin’ny varotra sakafo sy fitafiana ary ireo kilalao maroloko. Fetin’ny vola miditra ihany koa ny azy ireo.
Na ireo nandany vola na ireo nikaroka izany, samy tsy nahatsiaro ny ngidin’ny fiainana vetivety fa samy nilanonana avokoa. Dia tena fandresen’ny fety tokoa teto Madagasikara. Fa mbola hiatrika fety ihany koa ny ambanilanitra iray manontolo, manomboka izao. Fetin’ny fitohanana, fetin’ny fanenjehana fotoana, fetin’ny resaka politika, fetin’ny tsy fandriampahalemana. Tsy ambakan’izany koa ny fetin’ny loto navelan’ny fetin’ny Paska.
Tsy maintsy atrehina ireo na fety tsy hanome fahafaliana aza. Dia arahabaina daholo nahavita fety ê!